BAAQ – Shirka saraakiishii hore ee ciidanka Qalabka Sida & Bilayska Soomaaliyeed. [Akhris …] – Radio Daljir
Washington DC, Aug 10 – Dawlada Federaalka KMG ah ee Soomaaliyeed iyo Xafiiska Qaramadda Midooway u Qaabilsan Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya (UNPOS) ayaa waxay shir u qabteen Saraakiishii hore ee Ciidamadda iyo Booliska Soomaaliyeed ( Waa kuwii madaxda Ciidamada ahaan jirey). Shirkaasna wuxuu ka dhacay magaalada Washimgton DC inta u dhaxeysay 1-5 August 2009.
Shirkana waxaa shir gudoominaayey Wasiirka Difaaca, Prof. Gandi iyo Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midooway u Qaabilsan Arrimaha Siyaasada Somaaliya Ahmedou Ould-Abdalla. Waxaana shirka goob joog ka ahaa Wakiilka ka socda Ururka Midowga Africa.
Ayagoo si xoog leh ugu faa?ideysanaaya waaya?aragnimadoodii hore, saraakiishii hore ee Ciidamada iyo Booliska Soomaaliyeed waxay qiimeyn adag ku sameeyeen waxyaabihii ay ku wanaagsanaayeen iyo waxyaabihii ay ku liiteen Hay?adii hore nabadgelyada ee Soomaaliyeed. Waxayna hoosta ka xariiqeen sababihii ugu waa weynaa ee keenay burburkii Hay?adihii u qaabilsanaaa Somaliya Nabadgelyada, kadibna waxay soo jeediyeen Habkii iyo Wadiiqooyinkii loo mari lahaa soo celinta Nabadgelyada.
Waxaa kale oo ay Saraakiishii hore ee Ciidamada iyo Booliska Soomaaliyeed isla eegeen habkii loo dhisi Hay?adaha Nabdgelyada Soomaaliyeed iyadoo la raacaayo heshiiskii ku aadanaa Joojinta Iska Hor Imaadyada Hubeysan taasoo qeyb ka ahayd heshiiskii Nabadeed ee Jabuuti.
Shirka wuxuu tali ku soo jeediyey habkii ama siyaasadii loo qaadi lahaa talaabooyin iyo ficilo la taaban karo kuwaasoo ay ka mid yihiin:
1. In Farsamo ahaan la dhiso Hab Nabadgelyo ee Haboon iyo Ciidamadda Qalabka Sida ee Soomaaliyeed.
2. In wax laga qabto dhibaatada la xiriirta Xag-jirnimada iyo Burcad-badeednimada.
3. In lala yimaado Habkii loo sameyn lahaa Hub ka dhigis, Abaabul ka saarid iyo Dhaqan Celinba.
Ka qeybgalayaasha shirku waxay ugu baaqeen Xukuumada KMG ah ee Soomaaliyeed inay texgeliso habkay u adeegsan lahayd ugana qeybgelin lahayd Saraakiishii Hore ee Sarsare ee Cidaamada Qalabka Sida iyo Booliska iyo saraakiishii yaryaraaba inay ka mid noqdaan hay?adaha Nabadgelyada ee Qaranka. Waxayna ku dhiirigeliyeen Qaramadda Midooway iyo Dhamaan Bulshada Caalamka inay ku taageeraan Dadaalka Dawlada ee ku aadan suurtagelinta arintan.